Cafiska Daahir Riyaale
"Mase ra'yi Caalamka ayaa lagu Khaldayaa" Sidaas waxaa yiri Akhriste maqlay cafiska
Wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Daahir Riyaale Kaahin oo kusugan Dalka Koonfur Afrika laga soo weriyey in uu cafis u fidiyey Samsam.
Cafiska Daahir Riyaale ayaa la sheegay in uu ka soo baxay xafiiska Axmed Yususuf Yaasin, maadaama Daahir Riyaale ku maqan yahay Koonfur Afrika, sida laga soo weriyey Axmed Xasan Cali "Casoowe" oo ah wasiirka "caddaaladda" maamulka Hargeysa.
Lama shaacin waqtiga rasmiga ah ee cafiskaas la sheegay dhaqan gelayo iyo waqtiga Samsam Xabsiga laga siideynayo oo ay xor u noqoneyso in ay u safarto meeshii ay doonto.
Axmed Xasan Cali "Casoowe", wasiirka "caddaaladda", waxa uu ku adkaysanayaa in aan Samsam la kufsan, Samsam-na maxkamada horteeda ayey ka sheegtay in lix nin oo askarta kamid ah ay kufsadeen intii ay xabsiga ku jirtey, mid kamid ahna ay maxkamada horteeda ay tilmaantay.
Hargeysa waxaa ku sugan wafti ka socda qaramada midoobey qaybteeda u qaabilsan xuquuqda Aadamiga. Kuwaas oo cadaadis saaraya maamulka Hargeysa.
Waa la isweydiinayaa arinta la xiriirta cafiska ma war saxaafada loogu talagalay baa si aan su'aalo arintaas ku saabsan loo weydiin Daahir Riyaale oo booqanaya Koonfur Afrika.
XAQIIQADA SAMSAM AXMED DUCAALE:
Shaqada: Ardayad, dhigan jirtey Dugsiga Sare ee Imaamu Nawawi, Boosaaso
Laxiray: 15 August 2004, lagana xiray Guriga Axmed Yuusuf Yaasiin, madaxweyne ku xigeenka "somaliland", oo ay ku khaldantay. 15kii December 2004 ayaa maxkamada hargeysa waxay cadaysay in Samsam aysan ahayn qof da'weyn, hadalkaas oo maxkamadu ku burisey hadalkii taliyaha ciidanka booliska Hargeysa. Waxase maxkamadaasi sheegtay in ay Samsam ku xukuntay shan (5) sano oo xabsi ah.
Hadalkii hore ee Axmed Xasan Cali "Casoowe"